कार्तिक लागेकै दिन अचम्म भयो, दुईग्रह मिलेर यी राशिलाई बनाउने भए मालामाल ! – Online Khabar 24
कार्तिक लागेकै दिन अचम्म भयो, दुईग्रह मिलेर यी राशिलाई बनाउने भए मालामाल !
पहिले यो भिडियो,
एजेन्सी – कार्तिक महिनाको पहिलो दिन नै ग्रहचक्रमा उथलपुथल हुने भएको छ।
गएको केहि समय देखि उल्टो चालमा रहेका दुई महत्वपूर्ण ग्रहहरुले चाल परिवर्तन गर्न लागेका हुन्। कार्तिक महिना लाग्ने बितिकै चाल परिवर्तन गर्ने ग्रहहरुमा बुध र बृहस्पति रहेका छन्।बुध ग्रहले कार्तिक १ गते मध्यान्न ११ बजेर ५४ मिनेटमा चाल परिवर्तन गर्दा ९ बजेर १ मिनेटमा बृहस्पतिले चाल परिवर्तन गर्नेछ।
यी दुवै ग्रहले चाल परिवर्तन गर्दा सबै राशिलाई प्रभाव पर्नेछ। वक्री चालबाट गोचर चालमा दुवै ग्रह फिर्ता हुँदा १२ वटै राशिलाई भिन्न-भिन्न प्रभावपर्नेछ। त्यसमध्ये केहिलाई धेरै नै राम्रो प्रतिफल मिल्नेछ।
ज्योतिषीहरुले दिएको जानकारी अनुसार बुध र बृहस्पतिको चाल परिवर्तनले निम्न राशिहरुलाई धेरै नै राम्रो फल दिनेछ।
वृष राशि छोटो समयमा फाइदा उठाउन सकिनेछ। अध्ययन, लेखन तथा मनोरञ्जनमा समय बित्नेछ। पहिलेका कामबाट फाइदा भइरहनेछ। चुनौती पन्छाएर पनि काम बनाउन सकिनेछ। शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् भने प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। ईर्ष्या गर्नेहरूले हार खानेछन्।
व्यापार लगायत अर्थ लाभ हुने योजना प्रारम्भ हुनेछ। पहिलेका कमजोरीलाई सुधार्ने मौका मिल्न सक्ला।
कन्या राशि बिछोडिएका आफन्तसँग भेट हुनेछ। रमाइलो जमघटमा सहभागी हुने अवसर जुर्ला। सुन्दर पहिरनले व्यक्तित्व निखार्दै नयाँ काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। पहिलेको सफलताले थप हौसला जगाउनेछ।
पहिलेका कमीकमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ। मनग्य धन आर्जन हुनेछ। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने सहयोगीहरू प्रशस्तै भेटिनेछन्। खेलाडीहरुले पनि सहजै सफलता प्राप्त गर्नेछन्। सहजै अवसर प्राप्त हुनेछन्।
वृश्चिक राशि पराक्रम बढ्नेछ। अरूको काममा जुट्नुपरे पनि फाइदा आफैंलाई हुनेछ। टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ। भाग्यले विभिन्न अवसर थमाउनेछ। काम देखाएर अरूको मन लोभ्याउन सकिनेछ।
शुभचिन्तकहरूले साथ दिनाले पहिलेको चुनौती समाप्त होला। उपहारले उत्साह जगाउनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनाले मनमा आनन्द मिल्नेछ। अतिथिको रूपमा सत्कार समेत प्राप्त हुनेछ।
धनु राशि कार्यस्थल र सामाजिक स्तरमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ। मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। सुन्दर पहिरनमा ठाँटिएर व्यक्तित्व निखार्न सकिनेछ। एकपछि अर्को अवसर आउनाले मन प्रसन्न रहनेछ।
हिम्मत गर्दा आफ्नै प्रतिभाले फाइदा दिलाउनेछ। बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ भने साथ दिनेहरू बढ्नेछन्।
मीन राशि सहयोगीहरूले साथ दिनेछन् भने मेहनतले सम्मानित स्थान पनि दिलाउनेछ। पहिलेका कमजोरी सुधार्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। बोलीको भरमा काम सम्पादन हुनेछ। विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्ने बेला छ। पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ।
विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका रहनेछ। व्यापारमा अड्किएको रकम उठ्नेछ। भविष्यका लागि केही लगानी बढाउन सकिनेछ। तर अवसरवादीहरूले आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउन सक्छन्। साभार खबर पत्रिका डटकम
Prevदशैँको अन्तिम दिन अाज घट्यो की बढ्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
nextकुन महिनामा जन्मेका व्यक्ति अधिक सफल हुन्छन ? यस्तो छ राज